Ku Qaylintii Jamaahiirta Real Madrid Ee Bale, Ronaldo iyo Benzema,Kroos, Kulanka Sevilla iyo Waxyaabihii Uu Ancelotti Kaga hadlay Shirkiisa Jaraa’id Ee Ka Horeeya Kulanka Sevilla | Duul News International
Ku Qaylintii Jamaahiirta Real Madrid Ee Bale, Ronaldo iyo Benzema,Kroos, Kulanka Sevilla iyo Waxyaabihii Uu Ancelotti Kaga hadlay Shirkiisa Jaraa’id Ee Ka Horeeya Kulanka Sevilla	Diyaariye: Deeq Osman.
Tababaraha kooxda Rea Madrid ee Carlo Ancelotti oo qabtay shirkiisa jaraa’id ee ka horeeya kulanka ay Real Madrid la ciyaari doonto kooxda Sevilla . Real Madrid ayaa kulankii baaqiga u ahaa la ciyaari doonta kooxda Sevilla wuxuua Ancelotti shirkiisa jaraa’id kaga hadlay badan kulankan iyo kooxdiisa la xidhiidha.
Ancelotti ayaa wax laga waydiiyay in Gareth Bale uu yahay ciyaartoy anaani ah ama kali ciyaar ah wuxuuna Ancelotti ku jawaabay: “Bale wuxuu samaynayaa wixii ugu fiicnaa, wuxuu ku jiraa halkii ugu saraysay si uu kooxda u caawiyo. Sanadkii horeba wax fiican ayuu sameeyay. Saddex kulan final ayuu goolal ka dhaliyay, wuxuuna sameeyay xili ciyaareed fantastik ah, waanu ku raaxaysanaynaa Bale wuxuuna samaynayaa wax fiican”.
Ancelotti ayaa la sii waydiiyay in Gareth Bale uu niyadjabsanaa markii ay jamaahiirta kooxdiisu ku qayliyeen kulankii Real Sociedad wuxuuna Ancelotti yidhi: “Xaqiiqdii waxaan filayaa inuusan markii lagu foodhyay ama lagu qayliyay aanu maqlayn, aniguna maan maqlaynin. Anigu ma filaayo inuu walwalsan yahay, si fiican ayuu u ciyarayaa wuxuuna ku jiraa xaalad fiican, waxaanan rajaynayaa inuu sii wadi doono”. Waa markii labaad ee ay jamaahiirta Real madrid ku oriyaan Bale muddo bil gudaheed ah.
Ancelotti ayaa wax laga waydiiyay in booskaToni kroos uu caawiyay Illarramendi wuxuuna yidhi: “Anigu sidaan horeba u sheegay shaqadu waa isku mid cidii ciyaartaba, laakiin astaamaha ciyaartoyda ayaa kala duwan, Isco wuxuu caawiyaa kubbad dhisida, halka uu Illarra difaaca heerkiisa caawiyo”.
Saxaafada ayaa Ancelotti waydiisay in haddii ay Cristiano, Benzema iyo Bale ay dhamaan taam yihiin inay markasta wada ciyaari doonaan wuxuuna yidhi: “Haa, shaki la’aan way wada ciyaari doonaan. Wax shaki ahi kuma jiro in Cristiano, Bale iyo Benzema ay markasta doonayaa inay wada ciyaaraan”.
Kadib markii ay soo baxday in Benzema uu isku xidho qalab koranto ama laydh ku shaqaynaya ayaa Ancelotti la waydiyay in ciyaartoyda kooxdiisa oo dhami ay isticmaalaan: “Waan ognahay in Benzema uu isticmaalo qalabka korantada ku shaqeeya, todobaadkii mar ayuu isticmaalaa laakiin arintan maanu ka fadhiisan. Waa inaan daraasaynaa habkan”.
Ancelotti ayaa la su’aalay goolasha laga dhaliyo kooxdiisa bilawga ciyaarta wuxuuna yidhi: “Dhibaato shaqo ma aha laakiin bilawgayaga ayaa sidaa ahaa, waa inaanu hormar ka samaynaa goolasha bilawga lanaga dhaliyo waa inaanu si ka fiican ku bilaabanaa”
Iyada oo Real Madrid la ciyaaraysa kooxda Sevilla ayay kulanka ku xiga la ciyaari doontaa kooxda ay dariska yihiin ee Atletico Madrid waxaana Ancelotti la waydiiyay in kooxdiisu ay doonayso in ay Atletico Madrid la ciyaarto iyada oo toban dhibtood ka saraysa wuxuuna yidhi: “Anagu xisaab ahaan arinta kumaanu soo saarin, sababtoo ah dhamaadka xili ciyaareedkan wuxuu noqon doonaa mid la mid ah kii xili ciyareedkii kale oo kale. Ilaa dhamaadka saddexda kooxood waxay wadadi doonaan inay dagaalamaan. In aanu faa’iido haysanaa waa wax fiican laakiin taasi waxba ma go’aamin doonto”.